Indlu enamagumbi okulala ayi-5 eMorales de Rey, enegadi evaliweyo kunye neWiFi
Le ndlu, ibekwe eMorales de Rey, ilungele abakhenkethi abali-10. Inika amagumbi okulala ayi-5, igadi evaliweyo kunye neWiFi.
Indawo yokuphumla ilungele ukuphumla emva kosuku lokuphonononga. Gcoba kwisofa etofotofo kwaye wonwabele incwadi elungileyo phambi kweziko okanye uthathe ithuba lezinto eziluncedo ezifumanekayo, kubandakanya iWiFi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokwaneleyo ukulungiselela ukutya okuthandayo. Yonwabela isidlo sakho esijikeleze itafile yokutyela ehlala i-10 okanye ngaphandle, egadini okanye kwibalcony.
Indlu inamagumbi okulala ama-5 atofotofo, i-1 kubandakanya ibhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nendlu yangasese, 2 kubandakanya ibhedi ephindwe kabini kunye ne-2 kubandakanya iibhedi ezi-2 ezingatshatanga. Igumbi lokuhlambela lifakelwe ibhafu kunye nendlu yangasese. Indlu yangasese eyahlukileyo iyafumaneka
Indlu ineemveliso zokucoca, isicoci se-vacuum, izixhobo zoku-ayina, umatshini wokuhlamba kunye nokufudumeza okuphakathi.
Qaphela ukuba ukucoca, iitawuli, ilinen yebhedi kunye nerhafu yabakhenkethi zibandakanyiwe kwintlawulo yokurenta.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwindawo (ibandakanyiwe kwixabiso lokurenta). Ukutshaya akuvumelekanga ngaphakathi. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile xa zifunwa. Amaqela awavumelekanga.
Umnini uhlala kufutshane nepropati.
Le ndlu yonwabela indawo enelungelo eya kukuvumela ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho kule ndawo. Izinto ezininzi ezikulindileyo kwindawo ezingqongileyo, ezinje ngokuHamba iHashe, ukukhwela iHashe, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile eNtabeni, ukuQubha, ukuNqa iintaba, ukuLoba kunye nokuzingela. Uya kufumana iibhari ezinkulu kunye neendawo zokutyela kwi-300 m kunye nevenkile enkulu ngaphakathi kwe-3 km. I-Valgrande-Pajares ithambeka i-140 km kude nendlu. Ibala legalufa laseVillarrin likumgama oziikhilomitha ezingama-47 ukusuka endlwini.